फागुन २, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा विभिन्न कालखण्डमा लिखित लेखहरुको संगालोको पुस्तक ‘गुमनाम आमाहरुको कथा’ एक कार्यक्रमका बीच शनिबार सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीस्थित बालुवाटारमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच ‘गुमनाम आमाहरुको कथा’ नामक उक्त पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, जसका बरिष्ठ नेता अशोक राई, डा. मिना पौडेल, तुलानारायण शाह, दीपक वाग्लेले संयुक्त रुपमा उक्त पुस्तक सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा मुख्य वक्ताको रुपमा उपस्थित नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले डा. बाबुराम भट्टराई र आफूलाई अलगअलग राजनीतिक शक्तिका रुपमा बस्न नेपाली जनताले नदिने दावी गरेको छन् । २५ वर्षसम्म एउटै राजनीतिक पार्टीमा सहकर्मीका रुपमा रहेर काम गरेको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका निम्ति आफूहरुको अगुवाईमा जनयुद्ध भएको र वर्तमान संविधान पनि जनयुद्धकै उपलब्धि भएको प्रचण्डले बताएका छन् ।
प्रचण्डले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था जनहितमा नरहेको र डा. बाबुराम भट्टराईले आफनो पार्टीले छुट्टाछुट्टै रुपमा आन्दोलन जारी राखेको भएपनि मुद्दाका हिसावले अहिले पनि आफूहरु एकै ठाउँमा रहेको बताएका छन् । प्रचण्डले सहित, बेपत्ता र घाइते परिवार, इतिहासले पनि आफूहरुलाई एकठाउँमा आउन आब्हान गरिरहेको प्रचण्डले बताएका छन् । प्रचण्डले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि आफूहरुले जनयुद्धको सुरुवात गर्दाका घटनाक्रमहरु मात्रै नभएर देश विदेशमा तत्कालीन समयमा भएका घटनाक्रमहरुलाई समेत डा. भट्टराईले पुस्तकमार्फत सचित्र प्रस्तुत गरेको पुस्तक ऐतिहासिक दस्तावेजकै रुपमा रहेको बताएका छन् ।
पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको हत्या गरेर देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको भन्दै सरकारले गरेको गल्ती अदालतबाट सच्याएर नेपाली राजनीतिलाई सही मार्गमा हिडाँउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । पौडेलले अदालतले जनताको हित बाहिर गएर फैसला गर्न नसक्ने विश्वास आफूलाई रहेको भन्दै पुस्तकबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनले डा. भट्टराईद्वारा लिखित पुस्तक ‘गुमनाम आमाहरुको कथा’ आफ्नी आमाको पनि कथा भएको र सबै नेपाली आमाको कथा हो भनेका छन् ।
आफ्नै पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्तव्य राखेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जनताले साँचो अर्थमा अझै पनि अधिकार प्राप्त गरिनसकेको र त्यसका निम्ति निरन्तर संघर्षको खाँचो रहेको बताएका छन् । उनले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा साझा सहमति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले मधेसी, जनजाति, उत्पीडित, उपेक्षित जनताको हित नभएसम्म आफू निरन्तर संघर्षमा लागिरहेन समेत स्पष्ट पारेका छन् ।
कार्यक्रममा जसपाका बरिष्ठ नेता अशोक राई, डा. मिना पौडेल, तुलानारायण शाह र दीपक वाग्लेले समेत पुस्तकबारे आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
राजु क्षेत्री र विश्वदीप पाण्डेले संकलन, सम्पादन गरेकाे पुस्तक फाइन प्रिन्टले प्रकाशन गरेको हो ।